Simba Rokusika—“Musiki Wedenga Nenyika” — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
cl chits. 5 pp. 47-56
“Tarirai Kumusoro Nameso Enyu, Muone”
“Akaita Nyika Nesimba Rake”
“Zvinhu Zvose Zvinofema”
Kudzidza Musimba raJehovha Rokusika
Zuva Nenyika Dzaro—Kwazvakabva
1, 2. Zuva rinoratidza sei simba raJehovha rokusika?
WAKAMBOMIRA pedyo nomoto mumwe musi usiku kuchitonhora here? Pamwe wakatogota wakatambanudzira maoko ako kusvika paunonyatsonzwa kudziya kwemarimi acho. Kana wakanyanya kuswedera, wakabva wanzwa wava kunyanya kupiswa. Kana wakanyanya kudzokera shure, wakapindwa nechando nemhaka yemhepo yousiku yaitonhora.
2 Pane “moto” unodziisa ganda redu masikati. “Moto” iwoyo uri kupfuta uri makiromita mamiriyoni 150 kubva patiri!* Saka zuva rinofanira kuva nesimba rakawanda kwazvo kuti ukwanise kunzwa kupisa kwaro riri kure kwakadaro! Asi, pasi rinotenderera choto chinotyisa ichocho riri pachinhambwe chakakodzera. Dai pasi raiva pedyosa, mvura yose yepasi yaizopwa; dai raiva kuresa, yose yaioma kuita chando. Chero chimwe chezviviri izvi chaizoita kuti pasi redu risava noupenyu. Kunze kwokukosha kuupenyu pasi pano, chiedza chezuva chakachenawo uye chinoshanda zvakanaka, tisingatauri zvedu zvokufadza kwacho.—Muparidzi 11:7.
Jehovha “akagadzira chiedza nezuva”
3. Zuva rinopupurira chokwadi chipi chinokosha?
3 Kunyange zvakadaro, vanhu vazhinji havaoni zuva serinokosha kunyange zvazvo upenyu hwavo huripo nemhaka yaro. Nokudaro, havaoni zvatinogona kudzidziswa nezuva. Bhaibheri rinoti nezvaJehovha: “Ndimi makagadzira chiedza nezuva.” (Pisarema 74:16) Hungu, zuva rinounza mbiri kuna Jehovha, “Wakaita kudenga napasi.” (Pisarema 19:1; 146:6) Rinongova chimwe chezvinhu zvisingaverengeki zviri mudenga zvinotidzidzisa nezvesimba guru raJehovha rokusika. Ngatimboongororai zvimwe zvaizvozvi zvakazara tozotarisa pasi pano noupenyu huripo.
4, 5. Zuva rine simba uye rakakura zvakadini, asi rakasiyana sei nedzimwe nyeredzi?
4 Sezvaungave uchiziva, zuva redu inyeredzi. Rinoratidzika serakakura kupfuura nyeredzi dzatinoona usiku nemhaka yokuti kana richienzaniswa nadzo iro riri pedyo zvikuru. Rine simba rakawanda sei? Nechepakati paro, zuva rinopisa 15 000 000 degrees Celsius. Kudai waigona kutora kamedu kepakati pezuva kakaenzana nomusoro wepini wokaisa pasi pano, waisazogona kumira wakachengeteka uri makiromita 140 kubva pakari! Sekondi imwe neimwe, zuva rinobudisa simba rakaenzana nokuputika kwemazana emamiriyoni emabhomba enyukireya.
5 Zuva rakakura kwazvo zvokuti pasi redu rino rinopinda ka1 300 000 muzuva. Zuva inyeredzi yakakura kupfuura dzimwe dzose here? Aiwa, nyanzvi dzezvenyeredzi dzinoriti inyeredzi iri shore, duku, isingaremi (yellow dwarf). Muapostora Pauro akanyora kuti “nyeredzi imwe inosiyana neimwe pakubwinya.” (1 VaKorinde 15:41) Angave asina kuziva kuti mashoko akafuridzirwa iwayo ndeechokwadi sei. Kune nyeredzi yakakura kwazvo zvokuti dai yaizoiswa pane zuva chaipo, pasi redu raizodai riri mukati mayo. Kudai imwewo nyeredzi huru yaizoiswapo yainosvika kupuraneti inonzi Saturn—kunyange zvazvo puraneti iyi iri kure nepasi zvokuti zvakatorera chitundumusere-musere makore mana kuti chisvikeko chichimhanya kakapetwa kanopfuura ka40 kumhanya kwebara rapfurwa nechivhorovhoro chine simba!
6. Bhaibheri rinoratidza sei kuti nhamba yenyeredzi yakakura pakuona kwevanhu?
6 Chinotonyanya kushamisa kupfuura ukuru hwenyeredzi uwandu hwadzo. Kutaura chokwadi, Bhaibheri rinopa pfungwa yokuti nyeredzi dzinenge dzisingaverengeki, dzakaoma kuverenga se“jecha regungwa.” (Jeremia 33:22) Mashoko aya anoratidza kuti kune nyeredzi dzakawanda kupfuura nokure dzatinogona kuona nemaziso edu pasina chinoabatsira. Pamusoro pazvo, kudai munyori weBhaibheri akadai saJeremia akanga atarisa mudenga usiku ndokuedza kuverenga nyeredzi dzinooneka, aizodai akangoverenga dzinenge zviuru zvitatu, nokuti ndihwo uwandu uhwo ziso risina chinoribatsira rinogona kuona usiku hwakajeka. Nhamba iyoyo inogona kuenzaniswa nenhamba yetsanga dzejecha dzinongozara ruoko. Zvisinei, sezvazviri chaizvo nhamba yenyeredzi yakakura kwazvo, sejecha regungwa.* Ndiani angaverenga nhamba yakadaro?
“Iye unozvidana zvose namazita azvo”
7. (a) Gwara Renzou redu rine nyeredzi dzinenge ngani, uye iyoyo inhamba yakakura sei? (b) Kuomerwa kwakaita vanodzidza nezvenyeredzi kutaura nhamba yemapoka enyeredzi kunoratidzei, uye izvi zvinotidzidzisei pamusoro pesimba raJehovha rokusika?
7 Isaya 40:26 inopindura kuti: “Tarirai kumusoro nameso enyu, muone kuti ndiani wakasika izvozvi, unobudisa hondo yazvo yakawanda; iye unozvidana zvose namazita azvo.” Pisarema 147:4 rinoti: “Unotara kuwanda kwenyeredzi.” Nyeredzi ‘dzakawanda’ sei? Iwoyo hausi mubvunzo uri nyore. Vanodzidza nezvenyeredzi vanofungidzira kuti kune nyeredzi dzinopfuura mabhiriyoni 100 muGwara Renzou redu rino bedzi.* Asi ratiri isu rinongova rimwe remapoka enyeredzi mazhinji, uye mazhinji aiwayo akatozara nenyeredzi kupfuura apa. Kune mapoka enyeredzi mangani? Vamwe vanodzidza nezvenyeredzi vanofungidzira kuti mabhiriyoni 50. Vamwe vanofungidzira kuti kungangova neanosvika mabhiriyoni 125. Naizvozvo vanhu havatombozivi uwandu hwemapoka enyeredzi, chida nhamba chaiyo yemabhiriyoni ose enyeredzi dziri maari. Asi, Jehovha anoziva nhamba iyoyo. Uyezve anopa nyeredzi imwe neimwe zita rayo pachayo!
8. (a) Ungatsanangura sei ukuru hweGwara Renzou? (b) Jehovha anorayira kufamba kwenyeredzi munzirai?
8 Tinongowedzera kushamiswa patinofunga nezvoukuru hwemapoka enyeredzi. Boka renyeredzi reGwara Renzou rinofungidzirwa kuti rakafara makiromita 100 000 anofambwa nechiedza pagore. Fungidzira chadzera chechiedza chichimhanya zvinoshamisa, makiromita 300 000 pasekondi yoga yoga. Zvaizotorera chadzera ichocho makore 100 000 kuyambuka boka redu renyeredzi! Uye mamwe mapoka enyeredzi anopeta redu kakawanda pakukura. Bhaibheri rinotaura kuti Jehovha ari ku“tatamura” matenga makuru aya somucheka. (Pisarema 104:2) Anorayirawo kufamba kwezvaakasika izvi. Kubva pahuruva shomanana zvayo yomuchadenga kusvika paboka renyeredzi guru pane ose, zvose zvinofamba maererano nemitemo yezvisikwa iyo Mwari akagadzira ndokuita kuti ishande. (Jobho 38:31-33) Nokudaro, masayendisiti akafananidza kufamba kwakanyatsorongeka kwenyeredzi nokutamba kwounyanzvi kworumveesano! Saka funga zvino pamusoro paIye akasika zvinhu izvi. Haungobati muromo uchishamiswa here nesimba guru raMwari rakadaro rokusika?
9, 10. Simba raJehovha rinopupurirwa sei nenzvimbo yakaiswa nyika dzinopoterera zuva, puraneti yeJupiter, pasi redu, uye mwedzi?
9 Simba raJehovha rokusika rinoratidzwa mumusha wedu, pasi. Akanyatsoisa pasi nokungwarira zvikuru mukati mezvinhu zvose zviri muchadenga makakura. Mamwe masayendisiti anodavira kuti mapoka enyeredzi mazhinji angaratidza kuva asingagariki kana achienzaniswa nepuraneti yedu ine upenyu. Rutivi rukuru rweGwara Renzou redu sezviri pachena haruna kugadzirirwa kuti murarame chinhu. Nechapakati pacho pazere nyeredzi. Mwaranzi yakazara, uye nyeredzi dzinogara dzichipotsa dzabonderana. Nechokunonoperera boka racho renyeredzi hakuna zvinhu zvinodiwa kuti pave noupenyu. Pasi redu nedzimwe nyika dzinopoterera zuva zvakaiswa pakakodzera chaipo nechapakati penzvimbo mbiri idzi.
10 Pasi rinobatsirwa nomudziviriri ari kure asi ari mukuru—puraneti yeJupiter. Yakakura kakapetwa kanopfuura chiuru ukuru hwepasi, Jupiter ine simba guru regiravhiti. Zvichiguma nei? Inokweva kana kuti kusundira kure zvinhu zvinomhanya muchadenga. Masayendisiti anofunga kuti dai yakanga isiri Jupiter, zvinhu zvinorova pasi zvaizowedzera kuparadza kupfuura zvino nekakapetwa ka10 000. Pedyo nesu, pasi redu rakakomborerwa nomwenje wakasiyana nemimwe—mwedzi. Mwedzi hausi chinhuwo zvacho chokushongedza ne“chiedza chousiku,” chete asi unoita kuti pasi rirambe rakarereka zvakadzikama. Kurereka ikoko kunoita kuti pasi rive nemwaka yakadzikama inonyatsozivikanwa paichaitika—chimwe chinhu chinokosha chinotsigira upenyu pano.
11. Mhepo yakapoteredza pasi yakaitirwa kushanda sechidzitiro chokudzivirira sei?
11 Simba raJehovha rokusika rinooneka muzvinhu zvose zvakagadzirwa zviri pasi pano. Funga nezvemhepo yakapoteredza pasi, iyo inoshanda sechidzitiro chinodzivirira. Zuva rinobudisa mwaranzi inobatsira neinouraya. Apo mwaranzi inouraya inorova mhepo iri mudenga, inoita kuti oxygen ichinje kuva ozone. Ozone layer inoguma yavapo inozotora mwaranzi iyoyo yakawanda. Nokudaro, pasi redu rakagadzirwa rine musambureni waro unodzivirira!
12. Ko kutenderera kwemvura mumhepo kunoratidza sei simba raJehovha rokusika?
12 Icho chinongova chinhu chimwe pamusoro pemhepo yakatipoteredza, musanganiswa wakaoma kunzwisisa wemagasi wakanyatsokodzera kutsigira zvisikwa zviri kurarama pedyo nepasi kana kuti pasi pano. Pakati pezvinoshamisa zvomumhepo pane kutenderera kwemvura. Gore negore zuva rinosimudza anopfuura makiyubhiki kiromita 400 000 emvura achiita zvokupwititika kubva mumakungwa epasi pano. Mvura yacho inoita makore, ayo anotenderedzwa kwose kwose nemhepo. Mvura iyi, iyo zvino inenge yasefewa nokucheneswa, inova mvura inonaya, mazaya echando, uye chando, ichitsiva mvura yepasi pano. Zvakangoita sezvinotaurwa naMuparidzi 1:7, kuti: “Nzizi dzose dzinodira mugungwa, kunyange zvakadaro gungwa harizari; kunzvimbo kunoenda nzizi, ndiko kwadzinodzokerazve.” Jehovha bedzi ndiye anofanira kunge akaronga kutenderera ikoko.
13. Uchapupui hwesimba roMusiki hwatinoona mumiti neivhu zviri pasi pano?
13 Pose patinoona upenyu, tinoona uchapupu hwesimba roMusiki. Kubva pamiti mikuru mirefu inoreba kupfuura zvivako zvenhurikidzwa 30 kusvika patumiti tusingaoneki nemaziso tunokura turi mugungwa uye tunotipa yakawanda yemhepo yatinofema, simba raJehovha rokusika rinoonekwa. Ivhu chairo rizere nezvinhu zvipenyu—makonye, notumwe tupukanana tusingaoneki nemaziso, zvose zviri kushanda pamwe munzira dzakaoma kunzwisisa dzinobatsira miti kukura. Nenzira yakakodzera Bhaibheri rinotaura nezveivhu richiti rine simba.—Genesi 4:12.
14. Isimba rakadini rinogona kubudiswa kunyange neatomu duku?
14 Pasina mubvunzo, Jehovha ndiye “Akaita nyika nesimba rake.” (Jeremia 10:12) Simba raMwari rinooneka kunyange muzvinhu zviduku pazvose zvaakasika. Somuenzaniso, mudungwe wemaatomu miriyoni haumbosviki pakukora sebvudzi romunhu. Uye kunyange kudai atomu raizotatamurwa kusvika rareba sechivako chenhurikidzwa 14, mwoyo waro (nucleus) waingozokura setsanga yomunyu zvayo inenge iri muuriri hwechinomwe. Asi kamwoyo kadikidiki ikako ndiko kanobudisa simba rinoshamisa rinobudiswa pakuputika kwenyukireya!
15. Nokutaura pamusoro pemhuka dzakasiyana-siyana dzomusango, Jehovha akadzidzisa Jobho chidzidzo chei?
15 Humwe uchapupu hwakajeka hwesimba raJehovha rokusika hunoonekwa mukuwanda kwoupenyu hwemhuka dziri pasi pano. Pisarema 148 rinotaura zvinhu zvizhinji zvinorumbidza Jehovha, uye ndima 10 inobatanidza “mhuka, nezvipfuwo zvose.” Kuti aratidze kuti nei vanhu vachifanira kutya Musiki, Jehovha akambotaura naJobho pamusoro pemhuka dzakadai seshumba, mbizi, nzombe yomusango, Bhehemoti (kana kuti mvuu), uye Revhiatani (sezviri pachena garwe). Zvichirevei? Kana munhu achishamiswa nezvisikwa zvakasimba izvi zvinotyisa uye zvisingapfuyiki, anofanira kunzwa sei pamusoro poMusiki wazvo?—Jobho, zvitsauko 38-41.
16. Chii chinokuorora pamusoro pedzimwe shiri dzakasikwa naJehovha?
16 Pisarema 148:10 rinotaurawo nezve“shiri dzinobhururuka.” Imbofunga nezvemarudzi adzo akasiyana-siyana! Jehovha akaudza Jobho nezvemhou, iyo “inoseka bhiza nomutasvi waro.” Chokwadi, shiri iyi yakareba mamita maviri nehafu ingava isingabhururuki, asi inogona kumhanya makiromita 65 paawa, ichiita mamita mana nehafu panhano imwe! (Jobho 39:13, 18) Ukuwo albatross inopedzera uzhinji hwoupenyu hwayo iri mumhepo pamusoro pemakungwa. Yakangoberekwa yakadaro, shiri yacho ine mapapiro anosvika mamita matatu kana akatambanudzwa. Inogona kuyengerera kwemaawa mana yakangomisa mapapiro ayo. Mukusiyana, tsodzo ndiyo shiri duku padzose munyika, yakangoreba masendimita mashanu. Inogona kufambisa mapapiro ayo kanosvika ka80 pasekondi! Tsodzo, dzichipenya semabwe maduku anokosha ane mapapiro, dzinogona kuyengerera seherikopita uye kunyange kubhururuka nenhendeshure.
17. Blue whale yakakura zvakadini, uye sezvingatarisirwa tinofanira kuguma tati chii pashure pokufunga nezvemhuka dzakasikwa naJehovha?
17 Pisarema 148:7 inoti kunyange “zvikara zvegungwa” zvinorumbidza Jehovha. Fungidzira inowanzonzi ndiyo mhuka hurusa yati yamborarama panyika pano, blue whale. “Chikara” ichi chepasi pasi pegungwa chinogona kureba mamita 30 kana kupfuura. Inogona kurema seboka renzou 30 dzakura. Rurimi rwayo bedzi runorema senzou imwe. Mwoyo wayo wakaenzana nemotokari duku. Nhengo huru iyi inorova kapfumbamwe bedzi paminiti—mukupesana nemwoyo wetsodzo, uyo unogona kurova kanosvika ka1 200 paminiti. Imwe yetsinga dzeblue whale yakakura kwazvo zvokuti mwana angagona kukambaira ari mukati mayo. Chokwadi tinonzwa mwoyo yedu ichida kuti tidzokorore kurudziro inopedzisa bhuku reMapisarema yokuti: “Zvinhu zvose zvinofema, ngazvirumbidze Jehovha.”—Pisarema 150:6.
18, 19. Zvinhu zvipenyu zvakaitwa naJehovha pasi pano zvakasiyana zvakadini, uye zvisikwa zvinotidzidzisei nezvouchangamire hwake?
18 Tinodzidzei mukushandisa kunoita Jehovha simba rake rokusika? Tinoshamiswa nokusiyana-siyana kwakaita zvakasikwa. Mumwe munyori wepisarema akashamisika achiti: “Haiwa Jehovha . . . ! Pasi pazere nepfuma yenyu.” (Pisarema 104:24) Ichi ichokwadi chaicho! Vanodzidza nezvezvinhu zvipenyu vakawana marudzi anopfuura miriyoni ezvinhu zvipenyu panyika; asi vane maonero akasiyana-siyana pamusoro pokuti kungava here nezvakawanda semamiriyoni 10, mamiriyoni 30 kana kupfuura. Munhu anodhirowa mifananidzo dzimwe nguva angapererwa nounyanzvi hwokudhirowa. Mukupesana, unyanzvi hwaJehovha hwokugadzira—simba rake rokutanga nokusika zvinhu zvitsva zvakasiyana-siyana—sezviri pachena harina magumo.
19 Kushandisa kwaJehovha simba rake rokusika kunotidzidzisa nezvouchangamire hwake. Shoko rokungoti “Musiki” rinosiyanisa Jehovha nezvimwe zvinhu zvose, izvo zviri “zvisikwa.” Kunyange Mwanakomana waJehovha akaberekwa ari mumwe oga, uyo akashanda se“mhizha” panguva yokusika, haambonzi Musiki kana kuti Akasika pamwe naye muBhaibheri. (Zvirevo 8:30; Mateu 19:4) Asi, iye i“dangwe rezvisikwa zvose.” (VaKorose 1:15) Nzvimbo yaJehovha soMusiki inomupa kodzero yokuva iye bedzi changamire ane simba pazvinhu zvose.—VaRoma 1:20; Zvakazarurwa 4:11.
20. Jehovha akazorora mupfungwai kubva paakapedza kusika zvinhu zvepasi?
20 Jehovha amira kushandisa simba rake rokusika here? Bhaibheri rinotaura kuti apo Jehovha akapedza basa rake rokusika pazuva rokusika rechitanhatu, “akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose raakaita.” (Genesi 2:2) Muapostora Pauro akaratidza kuti “zuva” rechinomwe iri rakareba zviuru zvemakore, nokuti rakanga richiri kupfuurira paairarama. (VaHebheru 4:3-6) Asi “zororo” rinoreva kuti Jehovha akamira kushanda zvachose here? Aiwa, Jehovha haambomiri kushanda. (Pisarema 92:4; Johani 5:17) Saka zororo rake rinofanira kungoreva kumira kwebasa rake rokusika zvinhu zvinooneka zvepasi. Zvisinei, basa rake rokuita kuti zvinangwa zvake zvizadzike rakapfuurira risina kumiswa. Basa rakadaro rakabatanidza kufuridzirwa kweMagwaro Matsvene. Basa rake rakabatanidza kunyange kubudiswa kwe“chisikwa chitsva,” chichakurukurwa muChitsauko 19.—2 VaKorinde 5:17.
21. Simba raJehovha rokusika richaitei pavanhu vakatendeka nokusingaperi?
21 Apo zuva rokuzorora raJehovha richazoguma, achakwanisa kuti “zvakanaka” pamusoro pebasa rake pasi pano, sezvaakangoita pakupera kwemazuva matanhatu okusika. (Genesi 1:31) Kuti angasarudza kuzoshandisa sei simba rake guru kwazvo rokusika pashure paizvozvo zvichazoonekwa. Chero zvichaitika, tingava nechokwadi chokuti ticharamba tichifadzwa nemashandisiro anoita Jehovha simba rokusika. Nokusingaperi kwose, tichadzidza zvakawanda nezvaJehovha kuburikidza nezvaakasika. (Muparidzi 3:11) Sezvatinoramba tichidzidza nezvake, tichawedzera kushamiswa—uye tichaswedera pedyo kwazvo noMusiki wedu Mukuru.
Kuti unyatsonzwisisa nhamba huru iyi funga pamusoro peizvi: Kuti ufambe mufambo wacho nemotokari—kunyange uchimhanya makiromita 160 paawa, uchifamba maawa 24 pazuva—zvinokutorera makore anopfuura zana!
Vamwe vanofunga kuti vanhu vekare munguva inotaurwa muBhaibheri vanofanira kunge vakashandisa rumwe rudzi rweteresikopu yekare. Kana kusiri kudaro, vanofunga vachidaro, vanhu vomunguva idzodzo vangadai vakaziva sei kuti nhamba yenyeredzi yakakura kudaro, hadziverengeki sokuona kwevanhu? Kufungidzira kusina zvikonzero kwakadaro kunosiya Jehovha, Munyori weBhaibheri ari kunze kwenyaya yacho.—2 Timoti 3:16.
Funga kuti zvaizokutorera nguva yakareba sei kungoverenga nyeredzi mabhiriyoni 100. Kudai waizogona kuverenga imwe pasekondi yoga yoga—woramba uchidaro kusvika maawa 24 pazuva—zvaizokutorera makore 3 171!
Pisarema 8:3-9 Zvisikwa zvaJehovha zvingatidzidzisa sei kuzvininipisa?
Pisarema 19:1-6 Simba raJehovha rokusika ringatikurudzira kuita chii, uye nei?
Mateu 6:25-34 Ko kufungisisa pamusoro pesimba raJehovha rokusika kungatibatsira sei kurwisa kufunganya toisa zvinhu zvakafanira pokutanga muupenyu?
Mabasa 17:22-31 Kushandisa kunoita Jehovha simba rokusika kunotidzidzisa sei kuti kunamata zvidhori kwakaipa uye kuti Mwari haasiri kure nesu?